Ogaden News Agency (ONA) – Maxaad Kala Socotaa Ururkii IGADD ee La Dhisay 1986kii oo Itobiya u Afduubtay IGAD – Daawo
Maxaad Kala Socotaa Ururkii IGADD ee La Dhisay 1986kii oo Itobiya u Afduubtay IGAD – Daawo
Posted by ONA Admin	/ January 10, 2015
Ururka ay ku bahoobeen dawladaha Geeska Afrika waxaa la dhisay 1986, wuxuuna ahaa Urur loogu talagalay ka hirtagga Abaaraha iyo Horumarka sida ku xusan magaca waagaa la odhan jiray oo ahaa – Intergovernmental Authority on Drought and Development (IGADD). Waxaa keenay ururkan asaasidiisa baahidii ka dhalatay abaarihii isdaba jooga ahaa ee gobolka ka dhacay intii u dhexeysay 1974 iyo 1984, abaarahaasoo aad u dhaawacay cimiladii iyo bay’adii gobolka Geeska Afrika oo nabaad-guur ku sababay meela ka mid ahaa gobolka Geeska Afrika.
1983 iyo 1984 ayay lix dal oo Geeska Afrika ah – Jabuuti, Itobiya, Kenya, Somaliya, Sudan iyo Uganda – Qaramada Midoobay la kaashadeen dhismaha Urur Goboleed ay ugu talagaleen inay isaga taageersadaan arimaha la xidhiidha ka hortagga Abaaraha iyo Iskaashiga Horumarka.
Waxaa ku shiray caasimadda Jabuti Madaxweynayaashii 6daa dal oo saxiix ku duugay dhismaha ururka IGADD, iyagoo u doortay xarunta ururka inay noqoto Jabuuti.
Laga bilaabo 1995 waxay Itobiya olole u gashay inay ka dhigto IGADD urur ay ku adeegato oo danaheeda ay ku fushato. Sidaa daraadeed ayay shir lagu qabtay Adisababa 1995 ay ku dhawaaqeen madaxdii isugu tagtay halkaa in la cusboonaysiinayo barnaamijka ururka. Shirkii ka dhacay magaalada Nairobi 21kii March 1996, waxaa lagu saxiixay Charter cusub, magaciina waxaa laga dhigay IGAD (Intergovernmental Authority on Development). Waxaa meeshii laga saaray (Abaaraha), waxaana lagu tilmaamay in xidhiidhka ka dhexeeya dawladahaa ee Horumarinta ku saabsan la xoojinayo. 25kii November 1996 ayaa Jabuuti lagu saxiixay ururka IGAD ee badalay midkii hore. Marka la akhriyo qodobada ka hadlaya waxa laga doonayo inuu qabto ururka IGAD, waxaa kuu muuqanaya inuu yahay urur leh hadaf wanaagsan oo waxtar u leh shucuubta gobolka. Hasa ahaatee dhab ahaantii IGAD wuxuu noqday naadi ay isugu yimaadaan madaxda dalalkaa oo Itobiya ay ku adeegato, gaar ahaan markay gacanta ku dhigtay dalka Somaliya oo ahaa dal isha ku haya oo kasoo horjeeda danaha isticmaariga ah ee Itobiya.
Dawladda Eretreeya oo kusoo biirtay 1993gii markay ka xoroobeen gumaysigii Itobiya ee haystay ayaa ka baxday 2007dii markii qaabka IGAD uu hadda u shaqeeyo ay ka biya diiday oo ah habka ay Itobiya u doonayso inay ugu shaqaysato ururka IGAD, gaar ahaan markay Itobiya noqotay dawlad gacanta ku haysata kaararka ugu yaraan 3ex dal oo ka mid ah IGAD marka ay timaado in loo codeeyo qodobada laga doodayo.